Booliiska dalka Kenya oo xabsiyada u taxaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay ka tirsanyihiin koox burcad ah | Salaan Media
Home Wararka Booliiska dalka Kenya oo xabsiyada u taxaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay...
Dhalinyaradan oo isugu jira kuwo ku dhashay waddanka Kenya, Kuwo ka yimid Soomaaliya iyo waliba kuwo laga soo dhaqan celiyay wadamada dibadda oo dhammaantood isticmaala mukhaadaraadka, ………….
Nairobi (SM) Booliiska dalka Kenya ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay xabsiyada u taxaabay tobonnaan dhalinyaro ah oo looga shakisanyahay inay ku jiraan kooxda Super Power oo ah koox ay isku urursadeen dhalinyaro burcad ah oo lagu diray liiska kooxaha dambiilayaasha ah ee ka hawlgala dalka Kenya.
Dhalinyaradan oo isugu jira kuwo ku dhashay waddanka Kenya, Kuwo ka yimid Soomaaliya iyo waliba kuwo laga soo dhaqan celiyay wadamada dibadda oo dhammaantood isticmaala mukhaadaraadka, isla markaana taleefannada iyo lacagta ka furta dadka shacabka ah ayaa booliisku ay sheegeen in dhammaantood ay asal ahaan Soomaali yihiin kuna midoobeen falal burcadnimo ah oo lagu khalkhal galinayo amniga xaafada Islii ee Soomaalidu ay ka dagantahay magaalada Nairobi.
Saraakiisha booliska dalka Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cabashooyin is daba joog ay uga imaanayeen dadweynaha sannadihii ugu dambeeyay, taasoo keentay inay sameeyaan hawlgal ballaaran oo kooxahaas lagu soo qabqabanayo.
Gawaarida gaashaaman ee booliska ayaa habaynadii lasoo dhaafay hawlgallo isdaba-joog ah ka sameeyay xaafada Islii iyagoo qabtay tobonnaan dhalinyaro oo qaarkood maxkamado lasoo taagay.
Inkastoo dadweynaha xaafada Islii badankoodu ay u riyaaqeen tallaabadan ayaa haddana qaar kamid ah waalidiinta caruurta la xiray ay Hiiraan Online u sheegeen in lagu khaldamay ee aysan ka tirsanayn kooxaha Gangska ah ee fuliya falalka ammaan darrada ah.
Khadiijo Maxmed Faarax oo kamid ah hooyooyinka caruurtooda lagu qabtay hawlgalkan ayaa sheegtay in boolisku ay lacag raadis yihiin ee aysan qabanayn oo kaliya kooxaha dambiilayaasha ah.
waxaaney tidhi “Waan ku faraxsannahay in kooxahaas la qabqabto laakiin booliisku si ay dadka lacag uga qaataan ayay ku darayaan cid walba” ayay tiri Khadiijo oo sheegtay in wiilkeeda ay lacag gaaraysa 50,000 oo shilinka Kenya ah ay ku soo daysay.
Booliiska dalka Kenya ayaa wacad ku maray in la sii wadi doono hawlgallada tan iyo inta sharciga laga horkeenayo wax ay ku tilmaameen kooxo dhalinyaro ah oo xaalad argagax ku abuuray dadweynaha xaafada Islii.